Misy vitsivitsy ny mpandika lahatsoratra ho amin'ny teny malagasy ato amin'ny Global Voices amin'izao fotoana anoratana eto izao .
Jentilisa na Andriamifidisoa Zo monina eto Antananarivo, Madagasikara. Mpandika lahatsoratra ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 11 septambra 2007.
Lalaina monina eto Antananarivo, Madagasikara. Mpandika lahatsoratra ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 16 Oktobra 2010.
Mamisoa Raveloaritiana monina eto Antananarivo, Madagasikara. Mpandika lahatsoratra ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 22 Febroary 2011.
Imanoela Fifaliana monina eto Antananarivo, Madagasikara. Mpandika lahatsoratra ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 28 Mey 2011. (25 jona 2011 no voasoratra eo amin'ny mombamomba azy saingy mbola nozahana ny fahazotoany).
Sylvia Aimée monina eto Antananarivo, Madagasikara. Mpandika lahatsoratra ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 25 Jona 2011.
Haingo Labash monina eto Antananarivo, Madagasikara. Mpandika lahatsoratra ofisialy ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 6 oktobra 2015.
Liva Andriamanantena monina eto Antananarivo, Madagasikara. Mpandika lahatsoratra ofisialy ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 22 marsa 2016.
Salohy Randriafanomezantsoa monina eto Antananarivo, Madagasikara. Mpandika lahatsoratra ofisialy ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 28 aogositra 2016.
Harentsoa Rakotoson monina eto Antananarivo, Madagasikara. Mpandika lahatsoratra ofisialy ato amin'ny Global Voices teny malagasy nanomboka tamin'ny 01 aogositra 2017.
Nampiana ny 02 Aogositra 2017 20:16 GMT